Nepali Rajneeti | ‘त्यो किनारमा ज`ल्दै गरेको मेरो आमाको चि`ता हो’ काे-राेनाले दिएकाे दु:खकाे कथा !
‘त्यो किनारमा ज`ल्दै गरेको मेरो आमाको चि`ता हो’ काे-राेनाले दिएकाे दु:खकाे कथा !
बैसाख ३०, २०७८ बिहिबार ५१२ पटक हेरिएको
‘त्यो किनारमा ज`ल्दै गरेको मेरो आमाको चि`ता हो’ काे-राेनाले दिएकाे दु:खकाे कथा ! को- रोनाको दोस्रो लहर आएसँगै नेपालमा को-भिडले सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको दिन हिजो(सोमबार) मलिन र स्तब्ध अनुहार लिएर जलिराखेकी मृ- त आमालाई एकनासले हेरिराखेका थिए, करिब २२ वर्षे एक युवा ।
ज- लिसकेपछि आमाको शरीरको खरानी लिनको लागि हातमा दुई वटा घडा बोकेका उनी भन्दै थिए, ‘मेरो ममी हो । को-भिड र नि-माेनियाले बि- त्नु भयाे । दुई हप्ता अगाडिदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो।’ ज- ल्दै गरेकी ती आमाको जेठो छोरा उनी भन्दै थिए, ‘उहाँ (श- वहरुलाई ज- लाउँदै गरेका व्यक्तिलाई देखाउँदै) ले मृ- तकको नाम फलानो हो भन्यो भने खरानी दिनु हुन्छ ।
उ (औंलाले देखाउँदै) त्यो तल्लो पट्टि ज- ल्दै गरेको मेरो आमाको चि- ता हो। खोलाको किनारको।’ विद्युतीय श- वदाह गृहको पूर्वपट्टी बाग्मती नदीको किनारमा अर्थात् भस्मेश्वर घाटमा त्यो दिन ज- लिरहेका खचाखच श- वमध्ये ती आमाको श- व खोलाको तल्लो किनारमा द=न्द`नी ब`लिरहेको थियो।
एकैछिनमै ज`लिर`हेका श`वहरु नजिकै रहेका एक व्यक्ति आएर तिनै जल्दै गरेकी मृ- त आमाको छोराले बोकेको दुईवटा घडा लगे । तिनै छोरा, जसले चाहेर पनि आमालाई दा -गबत्ती दिन र अन्तिम क्षणमा अन्तिम पटक आमालाई अँगालोमा बाधेर रुन पनि पाएनन्। कारण थियो, को -भिडले मृ- त्यु भएकाहरुको श- व आफन्तले छुन पनि पाउँदैनन्, सिवाय परबारे प्लाष्टिकले बेरेको श- वलाई हेर्न बाहेक।
कस्तो समय आयो, मान्छेदेखि मान्छे ड-राउनु पर्ने है? भन्ने प्रश्नमा ति युवाले भने, ‘के गर्ने, भाइरस नै त्यस्तै खालको छ। सरकारले नै अलिकति बुद्धि नपुर्याएर पनि यस्तो अवस्था आएको हो क्या। त्यत्रो इण्डियामा मा-हामारी आउँदा नेपालमा एक महिनासम्म नराम्रो अवस्था थिएन। नाका नखोलिदिएको भए अहिले यस्तो भयावहको स्थिति आउने थिएन।’ पूरा पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ।